Barnaamijyada Xagaaga ee Dhalinta Boston | Boston School Finder
Barnaamijyada Xagaaga ee Dhalinta Boston
Ma U baahanahay In aan Qorshe U sameeyo Fasaxa Dugsiga Cunuggayga?
Xagaagu wuxuu noqon karaa wakhti nasasho iyo baashaal, laakiin sidoo kale waa wakhti muhiim ah oo loogu diyaar garoobayo sanad dugsiyeedka soo socda.
Sida laga soo xigtay Boston After School & Beyond (Barnaamijka Dugsiga Kadib iyo Wixii ka danbeeya ee Boston), "Cilmi baaris ayaa muujisay in qayb weyn oo ka mid ah farqiga u dhexeeya guusha ardayda udhaxeysa qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo asxaabtooda lagu macnayn karo helitaanka sinaan la'aanta fursadaha xagaaga."
Tani maxay uga dhigan tahay ilmahaaga? Farqiga u dhexeeya guusha waa erey isku dayaya inuu sharaxo sababta ardayda qaar ugu fiicnaadaan dugsiga halka ardayda kale ay haystaan wakhti aad u adag. Helitaanka barnaamij kuleylaha ku filan, ardaydaas oo dhib ku qaba dugsiga waxay horumarin karaan markay ku noqdaan dugsiga deyrta. Xog badan ka ogoow muhiimada barashada xagaaga su'aalaheena iyo Su'aalaha Boston After School & Beyond.
2021 Barnaamijyada Xagaaga ee Boston
Waxaa jira barnaamijyo badan oo xagaaga ah oo qiimo-jaban iyo kuwa lacag la'aan ah oo loogu talagalay qoysaska ku nool gudaha iyo kuwa u dhow Magaalada Boston. Dugsiyada Dowliga ah ee Boston waxay dhalinyarada siiyaan liis fara badan oo ah oo fursado ah, laga bilaabo xarumaha, barnaamijyada, iyo howlaha shaqada, tababarada, iyo mutadawacnimada, dhammaantood loo diyaariyay qaab heer fasal ahaan iyo da' ahaan ah. Halkaan ka bookho webseedka Howlaha Xagaaga BPS.
Cudurka faafa wuxuu saameyn ku yeeshay helitaanka barnaamijyada qaar, laakiin wali waxaa jira barnaamijyo xagaaga ah oo qorsheynaya inay ku shaqeeyaan shakhsi ahaan ama jadwalada wax laga badalay xagaaga 2021, iyagoo wali raacaya tilmaamaha gobolka iyo deegaanka ee badbaadada masiibada ee dhammaan ka qeybgalayaasha.
kA EEG 2021 Xarumaha Xagaaga iyo Tilmaamaha Barnaamijkahalkaan hoose
Halkaan kala soo deg 2021 Xarumaha Xagaaga iyo Tilmaamaha ayaka oo ah PDF kuna qoran Ingiriis.